मानसिक रोगको कारण के हो ? यस्ता छन् समाधानका उपाय | Diyopost
मानसिक रोगको कारण के हो ? यस्ता छन् समाधानका उपाय
मा प्रकाशित 174 पटक हेरिएको
काठमाडौँ, साउन १३ । सन् २०२० सम्म मधुमेह, उच्च रक्तचाप र अन्य संक्रमित रोगभन्दा मानसिक रोग अग्रपंक्तिमा आउने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमान गरेको छ । अमेरिकाजस्तो विकसित देशका धेरैजसो मानिस निद्रा लाग्ने औषधि सेवन नगरी निदाउन सक्दैनन् । पछिल्लो समय नेपालमा पनि मानसिक रोगी बढेका छन् । अब जानौँ, यसका कारण ः
१० वर्षे द्वन्द्वपछि पनि नेपाली जनताले अझै राजनीतिक स्थिरता अनुभव गर्न पाएका छैनन् । महँगी, असुरक्षा र अभावले हामीलाई गाँजेको धेरै भइसक्यो । देशको प्रतिकूल अवस्थाले समेत मानसिक समस्यालाई बढावा दिएको हालै भएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
चिन्ता, बेरोजगारी, उदासीनता, असहायपन, गरिबी, वितृष्णा, अतिमहत्वाकांक्षा र असुरक्षाजस्ता कुरा मानसिक समस्या बढाउने तत्व हुन् । परिवारबीच मेलमिलापको वातावरण नहुनु, दम्पती यौन सम्बन्धबाट सन्तुष्ट नहुनु आदि कारणले पनि मानसिक समस्या थपेको पाइएको छ ।
अहिले प्रविधिको विकाससँगै सोसल साइट तथा ग्याजेटको लत लाग्ने कारणले पनि मानसिक समस्या निम्त्याइरहेको पाइन्छ ।
नेपालमा मनोपरामर्श केन्द्र धेरै छन् । यद्यपि, त्यहाँ मानिस परामर्शका लागि कम जाने गरेका छन् । ती केन्द्रमा त मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्ति मात्र जान्छन् भन्ने आमधारणा छ । अर्को कुरा, अस्पतालमा मानसिक र मनोविज्ञान विभाग भए पनि सहकार्यमा कमी देखिन्छ । मानसिक चिकित्सकले परामर्शभन्दा पनि औषधी सेवन गराउँछन् । तर, मनोपरामर्शदाताले औषधि सेवन गर्ने सल्लाह नदिई परामर्श गर्ने गर्छन् । त्यसैले, चिकित्सकले साधारण रोगीलाई मनोपरामर्श केन्द्र पठाउने र मनोपरामर्शदाताले पनि गम्भीर रोगीलाई चिकित्सककहाँ पठाउनु राम्रो हुन्छ ।
सामान्य मानसिक समस्या औषधिले भन्दा योग, प्राणायाम र ध्यानबाट पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ । ध्यानको साक्षी साधनाअनुसार हाम्रो विचार, भावना र शरीरमा आइरहेको विचार, भावना र संवेदनालाई ठीक–बेठीक भनेर नछुट्याई होसपूर्ण रूपमा हेर्न सकियो भने बिस्तारै मानसिक समस्या समाधान हुन्छ । जसका लागि दैनिक अभ्यास गर्नुका साथै धैर्यको खाँचो हुन्छ । साथै, सकारात्मक चिन्तन र सन्तुलित भोजनले पनि सहयोग गर्छ । यसका लागि योग्य प्रशिक्षकसँग प्रशिक्षण लिन आवश्यक छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट